Gacan-qabsiga Albaabka, Gacan-qabsiga Albaabka dhalada, Gacan-qabsiga Albaabka Gudaha - YALIS
Gacan-qabsiga Albaabka Dhalada ee Frame Slim
Waa kuma YALIS Design
YALIS Design waa saaraha hormuudka ah ee ku takhasusay qalabka albaabada.YALIS Naqshad, waa astaan ​​inta badan loogu talagalay gacan-qabsiga albaabka kabaalka alwaaxyada zinc iyo xal qalab albaab oo xirfad leh oo leh khibrad 10 sano ka badan.
Waa Maxay Alaabooyinka Ugu Muhiimsan
YALIS Nakhshad alaabada ugu muhiimsan albaabbada albaabadu waxay ku yaalaan meel dhexe iyo dhamaadka suuqa oo leh nashqad gaar ah iyo tayada deggan, waxayna sidoo kale siisaa macaamiisha xalal qalab albaab oo xirfad leh.
YALIS Waxsoosaarka Caqliga leh
YALIS Design waxay leedahay warshad u gaar ah.Si loo horumariyo wax soo saarka si hufan, YALIS waxay soo bandhigtay qalab wax soo saar oo toos ah iyo nidaamka maamulka ISO sanadka 2020.
Xalka Codsiga Alaabta
Qaabka caatada ah ee muraayadda albaabka Hardware Solution
Iyada oo caan ka ah qaabka ugu yar, albaabbada muraayadaha caatada ah ayaa si tartiib tartiib ah u noqday macaamiisha.Si kastaba ha ahaatee, inta badan qufulka albaabka galaas ee suuqa kuma haboona albaabada muraayadaha caatada ah.Si loo xaliyo dhibaatadan, YALIS waxa ay furtay albaabada gacanta ee galaas caato ah iyo xal qalab albaabka caatada ah.
Xalinta Hardware Door yar
Sida alaab-qeybiyaha qalabka albaabka-dhamaadka sare, YALIS waxay soo saartay qufulo albaabbada ugu yar ee albaabbada ugu yar (albabka aan la arki karin iyo albaabbada saqafka-sare).Iyada oo gacanta albaabada ugu yar ay quful ka yihiin xudunta u ah, YALIS waxay dhexgelisaa xalka qalabka albaabka ugu yar.
Gudaha Alwaax Albaab Hardware Solution
YALIS waxay soo saartay qufulka albaabada casriga ah ee gudaha iyo albaabbada albaabbada raaxada oo la awoodi karo iyadoo la raacayo quruxda dhalinyarada iyo baahiyaha soo-saarayaasha albaabka, waxay siisaa xalal kala duwan oo alwaax gudaha ah oo loogu talagalay macaamiisha.
Xalka Hardware Doorka Deegaanka
Albaabada deegaanka, oo sidoo kale loo yaqaanno alwaaxyada alwaaxyada alwaaxyada, guud ahaan waxay leeyihiin dherer u dhexeeya 2.1m iyo 2.4m, oogada albaabkooda ayaa si xor ah loogu dari karaa oo lagu beddeli karaa albaabka albaabka.YALIS waxa ay samaysay xalal qalab albaabka deegaanka deegaanka oo ku salaysan sifooyinkan.
Qalabka albaabka qolka ilmaha Xalka Hardware
YALIS waxay fiiro gaar ah u leedahay badbaadada carruurta qolka ku jirta, sida shilalka oo si lama filaan ah u quful, gudaha ku dhaca, shilalka lama filaanka ah iyo wixii la mid ah.Sidaa darteed, YALIS waxay samaysay qufulka albaabka qolka carruurta ee albaabbada carruurta, kaas oo u oggolaan kara waalidiinta inay si degdeg ah albaabka u furaan marka ilmuhu khatar ku jiro.
Waxa uu ku dhex milmay warshadaha qalabka albaabka in ka badan 20 sano waxana uu xirfad u leeyahay dhismooyin qalab albaab oo kala duwan.In ka badan 20 sano, waxa uu urursaday waayo-aragnimo qani ah horumarinta qaab-dhismeedka iyo aqoonta qoto dheer ee hardware albaabka, iyo horumarinta alaabta sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Injineer geedi socodka YALIS, wuxuu si adag u koontaroolaa nidaam kasta oo shaqadiisa maalinlaha ah si loo hubiyo heerka farshaxanimada ee alaabada iyo tayada alaabada.Ka sokow hubinta heerka farsamada gacanta iyo tayada badeecadaha, waxa kale oo uu si joogto ah u horumariyaa farsamooyin cusub oo ku salaysan baahida suuqa iyo macaamiisha.
Waxa uu soo jiitaa dhiirigelinta nolol maalmeedka, isku daraa isbeddellada moodada casriga ah, wuxuuna isticmaalaa isbarbardhigga alaabta iyo dusha sare si uu alaabooyinka uga dhigo kuwo aad u kacsan laakiin sidoo kale aad u qurux badan, oo aad ugu dhow minimalism.
Waxa uu xamaasadiisa gelinayaa naqshad kasta oo badeecad ah, waxa uu raadiyaa fanka weligeed ah iyo kan ugu yar, waxana uu u ololeeyaa nolol hal abuur leh oo fudud.Dareenka gaarka ah ee khadka ayaa ah astaantiisa, wuxuuna aad u jecel yahay inuu u beddelo fikradaha naqshadeynta asalka ah oo uu u beddelo alaab farshaxan oo gaar ah.
Ruushka mosbuild wuu soo socdaa
Bandhiga qalabka dhismaha ee sanadlaha ah ayaa ugu dambeyntii ka bilowday Ruushka, Yalis ayaa ku dhow inuu ka qeyb galo.Booth: Pavilion 3 Hall14 G6123 Taariikhda: Maarso 29-Abriil 1, 2022 Waqtigaan, Yalis kaliya ma soo bandhigin noocyo kala duwan oo alaabooyin hardware ah oo leh labadaba shaqeyn iyo dareenka moodada, ...
Qufulka albaabka ciyaarta oo dhan waa kan.Way rogtay...
Albaabada aan la arki karin guud ahaan waa nashqado isku dhafan oo gidaarka ah.Albaabka iyo gidaarka waxaa inta badan loogu talagalay inay yeeshaan midab asal ah, kaas oo lagu dhejin karo meelo kala duwan oo shaqeynaya sida qolalka hurdada, qolalka waxbarashada, qolalka kaydka.Tani kaliya si weyn uma dhimi karto qiimaha, laakiin sidoo kale waxay gaari kartaa ...
Qufulka albaabka midabkee u egyahay
Cadaani waa midab ujeedo kasta leh, sidoo kale waa midabka ay saaxiibo badani jecel yihiin.Qufulka albaabka midabkee ayaa u muuqda mid wanaagsan oo leh albaab cad oo alwaax ah?Albaabada cad ee alwaaxdu waxay u badan yihiin qaabka casriga ah, oo ku habboon albaabbada albaabka dahabka ah ama Gacan-qabashada Albaabka Madow ee Gudaha waa doorasho wanaagsan.Sida loo waafajiyo alwaaxda...
wada tashi xor ah +86 18923312588